Wasiirka Amniga iyo Saraakiisha Ciidanka Dowladda Puntland Oo Barlamaanka Hortegaya.
Wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayno magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland ayaa sheegaya in wasiirka amniga iyo saraakiisha ciidamada difaaca iyo ammaanku ay hortegayaan barlamaanka.
Xildhibaanada barlamaanka Puntland ayaa lagu soo waramayaa inay u yeereen wasiirka amniga Axmed Dowlad iyo saraakiisha kala duwan ee ciidanka si ay wax uga waydiiyaan xaaladda ammaan iyo difaaca Puntland.
Barlamaanka Puntland oo kujira kal-fadhigiisii 40aad ayaa lafilayaa inay wasiirka iyo saraakiisha wax ka waydiiyaan xaaladda ammaan ee magaalooyinka Puntland gaar ahaan Boosaaso oo falal dhowr ah ka todobaddo kahor, dagaalka kadhanka ah Daacish iyo Alshabaab iyo daandaansiga Soomaaliland ee gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn.
War qoraal ah oo dhowaan ka soo baxay barlamaanka Puntland ayaa lagu sheegay in xukuumadda Puntland looga baahan yahay ilaalinta xuduudaha dalka, waxaana madaxweyne Gaas gudoonka barlamaanku ka codsaday inuu go’aan cad ka qaato arrimaha doorashada Soomaaliland.
Dhanka kalena, golaha xukuumadda Puntland oo yeeshay kulan xasaasi ah khamiistii lasoo dhaafay ayaa sheegay in Puntland aysan aqbali doonin doorasho kadhacda dhulkeeda.